Olee Ihe Ndị Bụ́ Eziokwu Banyere Chineke? - Naanị Ebe A Ka Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n'Ịntanet
ISI NKE MBỤ
14 Ọ bụrụ na ị chọọ ka mmadụ mata gị, gịnị ka ị pụrụ ime? Ị́ gaghị agwa onye ahụ aha gị? Chineke ò nwere aha? Ọtụtụ okpukpe na-ekwu na aha ya bụ “Chineke” ma ọ bụ “Onyenwe anyị,” ma aha ndị a abụghị ezigbo aha ya. Ha bụ utu aha, dị nnọọ ka “eze” na “onyeisi ala” bụ utu aha. Bible na-akụzi na Chineke nwere ọtụtụ utu aha. “Chineke” na “Onyenwe anyị” so na ha. Otú ọ dị, Bible na-akụzikwa na e nwere ihe bụ́ ezigbo aha Chineke: Jehova. Abụ Ọma 83:18 na-ekwu, sị: “Gị onwe gị, Onye aha Gị bụ Jehova, nanị Gị, bụ Onye kachasị ihe nile elu n’elu ụwa nile.” Ọ bụrụ na aha ahụ adịghị ná nsụgharị Bible gị, ị pụrụ ịga n’Ihe Odide Ntụkwasị dị n’akwụkwọ a iji mata ihe mere o ji dị otú ahụ. Nke bụ́ eziokwu bụ na aha Chineke pụtara ọtụtụ puku ugboro n’ihe odide oge ochie nke Bible. N’ihi ya, Jehova chọrọ ka ị mata aha ya ma jiri ya na-eme ihe. A pụrụ ikwu na ọ na-akọwara gị onwe ya n’ime Bible.
Mgbe ị chọrọ ka mmadụ mata gị, ị́ dịghị agwa yaaha gị? Chinekena-agwa anyị aha ya n’ime Bible
15 Chineke nyere onwe ya aha nwere ihe dị ukwuu ọ pụtara. Aha ya, bụ́ Jehova, pụtara na Chineke pụrụ imezu nkwa ọ bụla o kwere nakwa na ọ pụrụ imezu ihe ọ bụla o zubere.* Aha Chineke pụrụ iche, o nweghị oyiri. Ọ bụ nanị ya nwe ya. N’ọtụtụ ụzọ, Jehova pụrụ iche. Olee otú nke a si bụrụ eziokwu?
* E nwekwuru ihe ọmụma banyere ihe aha Chineke pụtara na otú e si akpọ ya n’Ihe Odide Ntụkwasị.